GỊnỊ bỤ Ọria ara ure umunwanyỊ
GỊnỊ bỤ Ọria ara ure umunwanyỊ
Ọria ara ure na-amalite mgbe kịrịkịrị akụrụngwa n’emebe anụ arụ mmadụ, malitere itọrọ onwe ya, mgbe ahụ mmadụ na agwaghi ya mee otua.
Ihe osise e sere n’elu na-egosi ara nwere ọrịa ure ara bidoro ebọdị bụ nke a ka nwere ike igwọta. Ị ga ahụ na ọ nweghi ihe n’egosi na ya bụ ara nwere ya bụ ọrịa. Yabụ nwanyị anaghịkwa enwe ihe ngbụ n’ụdị ọbụla Nani ihe ọ nwere bụ ọbere mkpụrụ n’adịghi egbu mgbu n’ara ya.
GỊnỊ na-akpata Ọria ara ure
Ọtụtụ mmadụ ga-achọ ima ihe n’ebute ọrịa ara ure. Gịnị mere mji nwee ọrịa ara ure?
Gịnị mere nwunyem, nwanne m nwanyị, nwam nwanyị m’ọbụ enyi m jiri nwee ọrịa ara ure. Ọ bụ ihe mu o-nwem, m’ọbụ ha onwe ha mere m’ọbụ na emeghi? Ọ nwere ihe mu m’ọbụ ha aka eme iji gbọchie ya bụ ọrịa. Achọpụtabeghi ihe ọ bụ ya na akpata ọrịa ara ure ma e nwere ihe ụfọdụ na-akwalite otu e si ebute ya dị iche iche. Uzọ ihe dịgasi iche iche na akpata otu esi ebute ọrịa bụ gasi:
· AFỌ OLEE MMADỤ DỊ: Umunwanyị ndị gbanaligọrọ n’afọ nwere ike ibụ ndị ha tọrọ atọ ụzọ nweta ọrịa ure ara nkea
· ESTROGEN: Nkea bụ ihe Chukwu tinyere na ahụ nwanyị ọji akwadọ ya maka alum dịn a nwunye, nakwa imu nwa. Ọ dị mkpa n’nwanyị ọbụla nwere nkea na ahụ maka ya. Ma ka ọ sila dị, ọ naghị adị mma ka ya bụ ihe jupụta nke ụkwụ ma ọ bụ na-apụta nnụkwụ.Ya bụ ihe anaghị akwusi na-abịa mgbe nwanyị dị ime, na-enye nwa ara.Mgbanwanye ọrịa ure na-ara nwanyị na-akpata na akarangwa akpọrọ estrogen na-agbapụta nnụkwụ. A na-ahụta ọnọdu dị otua ma nwanyị bidọ hụwa nsọ ya n’exigbọ oge, ihe dịka tupu ọgba afọ iri na abụ ọ ma nwanyị hụgịde nsọ ya wee ruọ oge ọ dị ihe kariri afọ iri ise na ise, ọ naghị aturunwu ime, ma ọ bụ imu nwa izizi ya ma afọ iri atọ gasia. ọ nweghi ihe mmadụ puru ime maka nkea. Mana enwere ike ibelata inwebiga akarangwa estrogenaoke site n’I na-anụ mkpụrụọkwu na-egbọchi nwanyị ituru ime.
Etu ahụ mmadụ siri dị:onye tofega ogologo oke ọ nwere ike I bute ọrịa ure ara. Ndị nke na-ebu oke ibụ ma ọ bụ hara otu ha na oge ha hụchara nsọ ha nwekwa ike ibute ọrịa ure ara. N’ agbata afọ ọbụla, abụ ba karia n’afọ ma ọ bụ ụkwụ nwanyị, onwere ike ibute ọrịa a.
Akụkọ banyere ezi na ụlọ: Nwanyị ọbụla nne ya, nwanne ya ma ọ bụ nwa ya nwanyị nwere ọrịa ure ara, nwere ike ibụ te ọrịa a.
Onye Nwebu ru ọrịa ure: Ụmụnwanyị nile nwere ọrịa ara ure n’otu ara ha n’oge mbụ nwekwara ike inweta ya n’ara nke ọzọ
Ọria ara ndị ọzọ: Ebepula ụfọdụ umunwanyị mkpụrụ dị n’ara ha nke dọkịnta ha siri n’ọbụghi ọrịa ara ure, mana ụfọdụ mkpụrụ ndịa nwere ike igọsipụta n’ onye ahụ ga-ebute ọrịa ara ule n’ọdịniihụ okwesiri ka elebara nkea anya nke ọma.
Ihe dị mkpa bụ na ọ bụghi mmadụ na-akpatara onwe ya ọrịa
A naghi ebute ya site na nri ma ọ bụ nje. Anaghị ebute ya site na mmeko nwoke na nwanyị, nke a na-ebute ya site n’aka onye nwere ya
Kedu ka mmadụ ga-esị mata ọrịa ara ure ma ọ hụụ ya
Ihe iribama a na-ebu zọ hụta n’ọrịa ara ure bụ site na ịhụta I zara aza, ya bụ ihe na-abịa dịka ọtụtụ kama ọgaghị egbu onye ahụ mgbu .
Nwanyị ọbụla hụtara ihe dị otu a na ara ya ga agbara ọsọ ga hụụ dọkịnta ozigbo ozigbo ka enwe ike ibepu ma nyocha ihe ọ bụ. Ara ọbụla rere ure anaghị adị ka ibe ya. ọ naghị ebute ihe mgbu, ọ naghị ebute ihe ụfụ, ahụ ọkụ, igbọ agbọ, inyu nsi oge ọbụla ma ọbụ me ka aguu ghara igu mmadụ, onweghi kwa ike igbọchi obibi ndụ mmadụ.
Enwere ike I nubeghị maka ya mbụ , ma ọ bụ hụta ya mbụ . Eleghi anya onwebeghi onye ọmere n’ezi n’ụlọ gị ma ọ bụ mee onye ị maara.Ọ dị otua, ị mata n’ aka nwere olileanya igwọta ọrịa a.
Ule ara nwere ike bidọ iba ọnya n’ọnụ ara ma ọ bụ n’akụkụ ya
N’aka nke ọzọ, n’ebe umunwanyị ndị ọzọ nọ, ọnụ ara ha nwere ike imiemi mina n’ime ara ha
Ogaghị adị ebe okwesiri idị. ọ dị otua, imata na nsọgbụ adịla, ọ kakwara gị mma n’igara ụlọọgwụ tupuu ọnụ otua. Makanailepuru mkpụrụ ahụ, anya ọ bụrụ ibụ gawa. ọ nwere ike pupụta n’ime ahụ were ghọ ọnya nke ga na apichapụta abụ na-esisi, ma ọ bụ pichapụta ọbara ma ọ bụ mmiri, nke na agaghi ananata ana, ganye n’agwọọrịa ure ara ahụ.
Dịka ọrịa ure a na-abawanye nwere ike metutagasia akụkụ, nnu ndị ọzọ nke gunyere ubụ ru, ọkpupu, anụ ahụnakwa akụkụ ahụ ndị ọzọ. Ihe bekee na-akpọ ọnọdu dị otua bụ metastasis. ọ na-adị ekesa ma gbasa n’ akụkụ ahụ nke nwere ike ibụ te nsọgbụ
Nkea mee, apughi igwọta ya ọzọ enwere ike imata na ya bụ ihe ejezuọla ahụ sitena ukwara, inwe nsọgbụ n’ikurume, afọ nwere ike koo eko, okpukpu a na-egbu mgbu ọkachasi ọkpupku azụ/ụkwụ nwere ike ida ngwụrọ ma ọ bụ janwuọ, ajanwu.
Enwere ike ỊchỌputa ỌrỊa n’oge?
Ee, enwere ike ichọpụta ya site na ị dị na elebanye anya n’ọnọdu ara oge nile. Nke a gunyere usoro nwanyị I na-esi eleta ya n’ọnwa ọbụla. ị mata ma ọ ga-ahụ mkpụrụ na ya, ọzọ. Gwa dọkịnta gị ya kuziere gị ka ị ga-esi amata maka ara n’ihe na eme na ya. Gwakwa dọkịnta gị ka ọ na-enyocha ara gị ọbụnagodu otu ụbọchị n’afọ ọbụla. Icha ara ọkụ sitena n’usoro akpọrọ MAMMỌGRAPHY afọ ọbụlamga-enyekwa aka.
Nkeji etu ọrịa siri gbasadọbe n’ahụ onye bụ ya a na-akpọ STAGING n’aha bekee.
NKEJI MBỤ: Nkea akpọrọ Tumọr na epekari – Nyocha eme n’okpuru akpa abụ , enweghi ihe achọpụtara nye ọrịa ure.
NKEJI ABỤ Ọ: Ya bụ Tumọr dị na agbata centimeter abụ Ọ na ise, onwere ike nwe ihe akpọrọ lymph nọde ma onwere ike ọgaghị enwe ya.
NKEJI NKE ATỌ: Agbariri nkeji nkea uzọ abụọ.
Nke mbụ : Akpu (tumor) nwere ike karia centimeter isii ma nwe kwa lymph nọdes na agaghari agaghari.
Nke abụọ: otu ọbụla ya bụ tumọr ahana, ọ na-ekesa mamaejezu ahụ niile, n’obi, nakwa ebe mmiri ara si agbapụta nke dị n’ okpuru ara nakwa n’obi.
Nkeji nke anọ: Agbanyeghi etu Tumọr aha na, ọ na-ekesa gbasasia banye n’ebe okpukpu makwa ihe ndị ọzọ dị.
Nke nke mbụ na abụ ọ na-ego sị na ọrịa ure ka na-ebidọ ebidọ,.
Nkeji nke atọ na anọ gọsiri n’olelarii ya bụ ọrịa bidọrọ.
Keduzi ka esi agwọ ọrịa ure ara
Enwere ike igwọ ọrịa ure ara achọpụtara n’oge na:
Mbepu:Enwere ike ibepu ara nile kpam kpam ma ọ bụ otu akụkụ ya. Ihe aga-eme na esite n’ihe ahụtara nke gị na dọkịnta gị ga-akparita n’uka.
Iji ọgwụ gwọọ ọrịa, nke a na akpọ Chemọtherapy
Nkea bụ iji ọgwụ gbụ piasia ihe bụ tere ya bụ ọrịa nke onwere ike igbasagọ n’akụkụ ahụ ndị ọzọ, ma ọ bụ finwuọ ara zara aza. Agbanyeghi na ọgwụ ndịa nwere ihe na-eso ya ma emecha, enwere ọtụtụ uzọ dọkịnta ga-esi gbọchie nkea ma meeka ọ dị ndị nwere ọrịa ure a mma n’ahụ.
Iji ihe akpọrọ Họmọne were gwọya
Nkeabụ iji ọgwụ nwere ike ikwusi ọrịa ure ahụ ịbawanye were gwọọ ya. Sitena igbanwe họrmọne ole dịn’ahụ.
Nkea bụ iji ọkụ were gbapia ihe na ebute ọrịa.
Nkeji ọbụla ọrịa a nọ na ya, n’ihe ọ chọrọ, ego ole, nakwa site n’ akarangwa enwe, enwere ọtụtụ uzọ onye nwere ọrịa ure ga-esi gwọọ ya.
Igwọ ọrịa na ete aka wee dị mkpa na onye nwere ya ga na-eje ụlọọgwụ oge ọbụla.
Igwọ ọrịa na-agara ọnụ, onye ahụ nwere ike kwusi…, okwesiri ka onye bụ ọrịaa na dọkịnta ya na akpanta uka. Ọ dị mkpa na onye nwere ọrịa ure a laa mere ka ndị bee ya mata, ka onwee ike igwa ha maka ya bụ ọrịa, ka ha bidọ ilebanye ara nke ha anya ozigbo. He ga-enyezi onye ahụ nkwadọ.
Ihe ya na igwọ ọrịa na-eso
Ọ bụghi ka esiri gwọ otu onye ka esi agwọ ibe ya. Ihe ya na igwọ ọrịaa na-eso na pụta ihe sitena nkeji a na-agwọya.
Ihe ya na igwọ ọrịaa na-eso na pụta ihe sitena nkeji a na-agwọya.
Eme ngwangwa, emeghara ọdachi. ọka mma n’ebidọrọ n’oge gwọwa ọrịa. Ijee leta ka ọrịa cancer a dị, nke a sitere oge ebepuru. onye ahụ akpụ ahụ ma ọ bụ mkpụrụ ahụ.
Isonyere usoro dị mma isi gwọ ọrịa a.
Ọ bụrụ ebe enweghi aziza a n’okpuru abụ , ọ bụrụ n’ ọrịa ure ahụ dị cm atọ n’ọbọsara ihe kariri percent mmadụ iri itenani bụ ndị bụ ọrịa n’adị ndụ n’afọ ise. Percent mmadụ iri isii ndị mkpụrụ dị n’okpuru abụ ha agaghi ebute ọrịa n’afọ ise na-abịa.
Ọ bụrụkwa n’ ọiaa anọtela aka n’ahụ mmadụ, ọpụtara n’onweghi ihe a ga-emenwuzi, ebe ndụ dị ka olileanya na-adị, ihe ndị a agupụtara gọsipụtara ihe ahụnu n’ọfụfụ ndị bụ ọrịa onweghi dọkịnta ga agwa gị n’ ihe a bụ ihe ọhụru n’ahụntegị. Ọ bụrụgodu na ọrịaanaghị anabata egwugwọ a na-enye ya. Ndị dọkịnta kwesiri I ma ihe ha ga-eme hụ na onye bụ ọrịa anaghị enwe ihe mgbu .
Kedukwanu maka ije nata ogwugwo site na aka dibia Igbo?.
Onye ọbụla na-eleta ndị nwere ọrịa ure ara kwesiri ime ihe ọbụla ọ ga-eme ka onye ahụ ghara ita ahụhụ. Agbanyeghi na amuma “nka” ọ bụla agbagịdere, agaghi enyeọcha ọ ga-aka nke ọbụla onye ọzọ ga-enye gị tata mma. Inwekara ike isonyere na-eme nyocha ka ị maara na ị ga enwepụta usoro kacha mma isi gwọ ọrịa a.